मोवाइल र इन्टरनेट विना कसरी लेख्छन सिके राउतले ट्वीट ? – YesKathmandu.com
हिरासतमा राखिएको व्यक्तिलाई प्रहरीले मोबाइल चलाउन दिँदैन । तर,राज्य विरुद्ध संगठित अपराध गरेको आरोपमा १० दिने थुनामा रहेका सिके राउत निरन्तर सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना विचार पोखिरहेका छन ।
राउतले इन्टरनेटमार्फत् आफ्ना विचार राखिरहेका छन् । उनको ट्वीटर एकाउण्ट घण्टा घण्टामा अपडेट भइरहेको देखिन्छ ।
गत, बिहीबार जनकपुरबाट पक्राउ परेका राउतलाई राति नै सिराहा ल्याएर प्रहरीले अनुसन्धानका लागि जिल्ला अदालत सिराहाबाट १० दिनको म्याद पनि थपेको छ । हिरासत भित्र मोवाइल र इन्टरनेट सुविधा नभए पनि निरन्तर राउतको टिव्ट कसरी अपडेट भइरहेछ ?
तर प्रहरीले भने सिके राउतलाई अरु सरह नै हिरासतमा राखिएको भन्दै अन्तैबाट उनको ट्वीटर अपडेट भइरहेको जनाएको छ ।
ति प्रहरी अधिकारीले भने राउतलाई हिरासतमा राखेका छौं, ट्वीटर अन्तैबाट अपडेट भइरहेको प्रस्टाएका छन । हिरासतभित्रै बाट यस्तो संभावना नरहेको प्रहरीको भनाई छ । उनलाइ मोबाइल चलाउन समेत नदिइएको प्रहरीले दाबी गरेको छ ।
देशले जित्दा मेरो पार्टीले हारे पनि केही फरक पर्दैन
गाउमा भलिबल र बास्केटबल मैदान निर्माण
एक करोड नागरिकको कुरा राजनाथको होइनः भारतीय दुतावास
युवासंघ हातमा दहि जमाएन नबस्नेः पहारी
निर्वाचन आयोगको निर्देशिका आउँदै
मोदीको उधारो आश्वासनमा गृहमन्त्री निधि गमक्कै
मोदी स्वदेश फर्केलगत्तै चीन जाने तयारीमा ओली